Enwere ike iji Samsung's AR Emoji mee ihe n'oge oku vidiyo na ọdịnihu | Akụkọ akụrụngwa
N'oge MWC ikpeazụ na Barcelona, ​​ụlọ ọrụ South Korea malitere The AR Emoji maka Samsung ọhụrụ gị Galaxy S9 y Galaxy S9 PlusModelsdị abụọ ahụ nwere ngwa na-enye gị ohere ịme emojis ahaziri iche. Eziokwu bụ na ọtụtụ kwuru na nke a bụ akwụkwọ Animoji nke Apple, mana ebe ọ bụ eziokwu na ha yiri, ha bụ ihe abụọ dị iche iche.
Ọ bụghị oge ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ha abụọ ebe ọ bụ na nke a bụ ihe anyị hụrụ ogologo oge gara aga, mana ugbu a ekpughere ya a patented ngwa na Patently Mobile, nke na-ekwu banyere Samsung's AR Emoji na ọ ga-ekwe omume na a na-eji ihe ndị a akpọ oku vidiyo na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ngwa ọhụrụ maka oku vidiyo
Na nwa oge ebe iji jiri AR Emoji na oku vidiyo ọ dị mkpa ịnwe Igwefoto n'ihu na ihu ihu na 3D ma n'oge ahụ Samsung enweghị ya. Ọrụ ọhụrụ ahụ ga-abịa n'ọdịnihu dị anya, ikekwe na nsụgharị ọzọ nke Galaxy S10 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, mana ugbu a ọ chọrọ ngwanrọ na ngwaike.
Ezi ihe banyere patent bipụtara Patently Ekwentị bụ na ọ na-egosi sistemụ iji AR Emoji ndị a na oku vidiyo ọ bụla na nke a na - eme ka ụda ya nwere ike bụrụ ihe nkịtị. Ọ bụkwa eziokwu na emojis ndị emepụtara na Samsung Galaxy S9 na S9 Plus abụghị ezigbo dị ka mmadụ ga-achọ, mana ha bụ emojis yabụ na ha ekwesịghị ịbụ nnomi zuru oke nke ihu anyị. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na patent na-aga n’ihu n’oge na - adịghị anya ma ọ bụrụ na Samsung mechaa mejuputa ya na oku vidiyo ma ọ bụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Enwere ike iji Samsung's AR Emoji n'oge oku vidiyo na ọdịnihu
Nke a bụ ụlọ nkwari akụ maka ndị na-egwu egwuregwu nke Alienware kere